Otu esi eme ulo jukebox | Akụrụngwa n'efu
Otu esi eme ulo jukebox nke ulo
Egwu dị n’azụ bụ ihe anaghị anwụ anwụ, n’agbanyeghi na ọ bụ ụdị afọ 70 na afọ 80. Otu n’ime ihe ndị kachasị ewu ewu n’afọ ndị ahụ bụ jukebox ma ọ bụ jukebox a ma ama nke debere ebe ma ọ bụ mmanya maka obere ego. Omume ochie a emeela ka jukebox na-ewu ewu ọzọ na ọbụlagodi na egwu egwu nke oge a dịka Spotify ma ọ bụ Deezer.
Ọzọ anyị ga-akọwazu otu esi ewulite ulo jukebox eji eme ulo n’enweghi ego ma obu jiri ngwa oru ochie na mgbe ochie nke nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma ma ọ bụ dịka ha kwesiri. Mana tupu Kedu ihe bụ jukebox?
1 Kedu ihe bụ jukebox?
2 Kedu ihe ndị m chọrọ?
3 Embchịkọta Jukebox
4 Etu esi eji Jukebox a?
5 Ihe ndị jukeboxes ha agwụla oge?
Kedu ihe bụ jukebox?
Nye ọtụtụ ndị Jukebox ga-ada dị ka teknụzụ ọhụụ dị oke ọnụ, ndị ọzọ ga-ada ka ọchị, mana n'eziokwu, jukebox dị iche na echiche ma ọ bụ nkwupụta ndị a.
Jukebox bụ okwu bekee na-ezo aka na jukebox, jukebox ma ọ bụ ọkpụkpọ ọdịnala ọdịnala nke dị na Ogwe na ebe ntụrụndụ, ịbụ nnukwu ihe iji dozie ụlọ ma ọ bụ ụlọ. Ejiji maka retro emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ chọọ ma nwee ọ thisụ na ngwaọrụ a n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na mgbe a mụrụ ha, ha abụkwaghị ejiji ma ọ bụ na anaghị arụpụta ha na ụlọ ọrụ, ọ bụ ezie na ekele maka teknụzụ n'efu, ịdị adị nke Jukebox nwere “emeghari ohuru” nwere ihe ohuru dika igwe okwu oma, imetu ihu ma obu ego site na ngwa ndi akwuru ugwo kama oghere mkpụrụ ego.
Ihe njirimara nke jukebox bụ a ndepụta nke music na nwere ike ịbụ digitally ma ọ bụ n'ụzọ anụ ahụ site na diski; okwu iji wepụta ụda ma ọ bụ egwu anyị họọrọ na interface iji họrọ egwu ma ọ bụ ndepụta nke egwu anyị chọrọ ige ntị. Ekele maka Internetntanetị nke Ihe, jukeboxes ọhụrụ ahụ bụ ngwaọrụ dị mma nke nwere ike jikọọ na smartphone anyị ma jiri ihuenyo nke mkpanaka ahụ nwere interface iji họrọ abụ ma ọ bụ ndepụta nke abụ.
Kedu ihe ndị m chọrọ?
Owuwu nke ulo ma obu omenala jukebox di nfe n’agbanyeghi na onu ahia nke ihe nile adighi ala ma oli jukebox chọrọ ụfọdụ ihe ndị ọnụahịa ha nwere ike ime ka ọrụ ahụ dị oke ọnụ, mana anyị nwere ike dochie ha ma ọ bụ jiri ihe ndị ọzọ si na ọrụ ndị ọzọ, ya mere ọnụahịa ahụ nwere ike ịdalata nke ukwuu.
The ọcha na anyị ga-achọ na-:
16 GB kaadị microsd
Mkpọchi GPIO, eriri, na bọọdụ mmepe
Ndị na-ekwu okwu
Smart bọlbụ (Philips Hue, Xiaomi, wdg ...)
Anyị ga-achọkwa ụlọ ma ọ bụ etiti iji chekwaa ihe niile dị n’ime jukebox anyị ji arụ ụlọ. Maka nke a, anyị nwere ike iji osisi, iko na obere kaadiboodu mepụta onwe anyị ma ọ bụ nweta jukebox mebiri emebi nke anyị na-atụfu ma tinye jukebox anyị mepụtara.
N'ime oru a, anyị ga-eji Raspberry Pi, bọọdụ SBC nke nwere ike ọ bụghị naanị ijikwa faịlụ ọdịyo dị iche iche kamakwa enwere ike jikọọ na ngwaọrụ ndị ọzọ. Mana ka ọ rụọ ọrụ nke ọma, anyị ga-etinye sistemụ arụmọrụ. Na nke a anyị họọrọ maka Prota OS, sistemụ arụmọrụ nke ga-eji amamihe jikwaa Jukebox. Gbanye ukara website ọbụghị naanị na anyị nwere sistemụ arụmọrụ mana anyị ga-enwekwa ụzọ ịdekọ ihe onyonyo na kaadị microsd. Ozugbo anyịdekọtara ihe oyiyi ahụ, anyị na-anwale ya na Ras Pi na ọ bụ ya.
Ugbu a anyị nwere rịa elu osisi rụọ ọrụ dị ka ahụ igodo maka Jukebox anyị. Mbụ anyị ga-etinye bọtịnụ na bọọdụ mmepe. Mgbe ahụ, anyị ga-etinye eriri ndị dị n'akụkụ bọtịnụ ahụ na n'akụkụ nke ọzọ nke eriri jikọọ njikọ iji zipụ eriri niile na ọdụ GPIO nke Raspberry Pi. Nke a ga - emepụta bọtịnụ jukebox nke anyị mechara nwee ike ịhazi ma ọ bụ rụgharịa.
Ugbu a, anyị ga- hazie ngwa GPIO hazie bọtịnụ ndị anyị ahaziri ma jikọọ na Raspberry Pi.
Ozugbo anyị ahazi ọdụ ụgbọ mmiri GPIO, anyị ga-aga Volumio, ngwa egwu Prota OS ma hazie egwu na ndepụta egwu dị iche iche nke anyị ga-emecha jiri na jukebox na ngwa ahụ. N'ezie, ọ bụghị naanị na bọtịnụ ga-ejikọ na ọdụ GPIO kamakwa ndị na-ekwu okwu ga-ejikọ na ọdụ USB nke Raspberry Pi.
Ugbu a, anyị ga-ejikọ bọlbụ smart. Igwe ọkụ ndị nwere agba bụ akụkụ dị mkpa nke jukebox, na nke a anyị na-aga iji a smart oriọna nke na-agbanwe agba dị ka song. Iji mee nke a, anyị ga-ebu ụzọ jikọọ bọlbụ na Prota OS. Ozugbo ejikọtara ya, na Prota OS anyị ga-ahụ ngwa a na-akpọ Akụkọ nke ga-eme ka anyị nwee ike ịgbanwe ụfọdụ akụkụ. Ọrụ ahụ ga-abụ dị ka ndị a: Ọ bụrụ na a pịa ndepụta 1, bọlbụ na-agba agba agba. A ghaghi iwu iwu a site na egwu egwu obula anyi meputara.
Ugbu a anyị nwere ihe niile gbakọtara, anyị ga-echekwa ihe niile n'okwu a na anyị nwere ike iwuli onwe anyị ma ọ bụ jiri aka ochie ma ọ bụ nke ochie jukebox, nke a ị ga-ahọrọ onwe gị.
Etu esi eji Jukebox a?
Ojiji nke jukebox a na-adọrọ mmasị n'ihi na anyị nwere ike ịmepụta ndepụta dị iche iche na egwu dị iche iche, ya bụ, otu egwu kwa bọtịnụ ma ọ bụ na anyị nwere ike ịmepụta ndepụta egwu kwa bọtịnụ ma dakọtara ya na agba bọlbụ ọkụ. Na eduzi anyị soro na Instructables ekwu okwu jiri mmemme nke atọ dịka IFTTT nke na-arụ ọrụ ụfọdụ na Rasberi Pi. Ya mere, anyị nwere ike iji ndị ọkà okwu amamịghe dị ka Amazon Echo ma ọ bụ tinye mgbakwunye ihe mmetụta iji gbanye ya ma malite ịrụ ọrụ ma ọ bụ naanị na mgbe ngwaọrụ ụfọdụ dị ka ama abịarutere, jukebox na-akpọ ụfọdụ egwu ma ọ bụ abụ. Yourself na-ejedebe oke onwe gị.
Ihe ndị jukeboxes ha agwụla oge?
Ugbu a, lee anya n’achụghị jukebox, ị nwere ike ịjụ ma ha dị mkpa n’ezie ma ọ bụ na ọ bụghị. Maka ndị hụrụ n'anya n'anya, ochie, jukeboxes ka na-adọrọ mmasị ebe ọ na-enye anyị ohere ige egwu na-enweghị dabere na ama ma ọ bụ kọmputa. Kedu ihe ga - abụ "iPod ochie ochie", maka ndị hụrụ Apple n'anya.
Mana ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọrụ bara uru n'ezie, anyị anaghị eche banyere ngwaọrụ ahụ naanị na anyị chọrọ ige egwu, ihe ngwọta kachasị mma bụ ọkà okwu nwere ọgụgụ isi ejikọtara na smartphone anyị iji chọọ ụlọ ọ bụla mma jiri egwu anyi choro. Ihe si na ya pụta bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ma ọ naghị arụ ọrụ karịa ịmepụta jukebox n'onwe anyị. Ugbu a, nsonaazụ ahụ abụghị n'efu na ahaziri onwe anyị ka ọ bụrụ na anyị kere ngwaọrụ a n'onwe anyị. Cheghị otú ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ntu Pi » Otu esi eme ulo jukebox nke ulo
Ezigbo ederede, ekele!
Ihe nlere maka Arduino, IDE maka ndị ọrụ Arduino kachasị novice
Tresdpro R1, ọkachamara na-ebi akwụkwọ nke Spanish